ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/11/12
ဂျပန်ဘတ်(စ)များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြေးဆွဲမည်
By :နှင်းကို (သာစည်)
ပြည်တွင်းယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲမှုများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယာဉ်လိုင်းများ ၀င်ရောက်ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၃၀၀)ခန့် အကုန်အကျခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်ကားလိုင်းများ ပြေးဆွဲရန်စီစဉ်နေကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြားသည်။
ဇွန်(၄)ရက်တွင် ဟိုတယ်ချက်ထရီယမ် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက "ဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ပြောထားတယ်။ ဂျပန်က ဒေါ်လာသန်း(၂၅၀)-(၃၀၀)လောက် အကုန်အကျခံပြီးတော့ ဒီမှာကားလိုင်းတွေဆွဲမယ်။ အဲဒီကားလိုင်းတွေက စံနစ်ကျတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုတွေပါလာမယ်။ အချိန်မှန်ထွက်မယ်။ ကားခကိုလည်း ကတ်စံနစ်နဲ့ သုံးတာတို့ ပါလာမယ်။ Taxi တွေလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ။ ဂျပန်ကလာမယ်။ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေစေဘို့ပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ပြည်တွင်းယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲမှုတွင် ဂျပန်နိုင်ငံကဲ့သို့ နည်းပညာ မြင့်မားကာ စည်းကမ်းရှိသည့်နိုင်ငံမှ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများဝင်ရောက်ပြေးဆွဲပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း အခြေခံလူတန်းစား ၀န်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် အခြေခံ အထောက်အပံ့ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Source: Flowers News Journal
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားပြီးနေလည်ခင်းဖြစ်သည့်အတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေကြောင်း ဘူးသီးတောင်ဒေသခံ7Day News သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။ "ပစ်သံ ခတ်သံဆူညံသံတွေမရှိဘူး။ ညဘက်ကျမှကြောက်ရတာ။ ညဘက်ဆိုဘင်္ဂါလီတွေကထွက်လာတတ်တယ်။ ခုတော့ ဆေးရုံမှာ လူနာသစ်ရောက်လာတာမျိုးလည်းမရှိဘူး" ဟု သတင်းထောက်က တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်သတင်းပေးပို့သည်။ ဒေသခံများမှာဈေးများလည်းပိတ်ထားသည့်အတွက် ရေရှည်စားသောက်စရာအတွက်ပူပန်နေကြပြီး လိုက်လံရှာဖွေဝယ်ယူနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၃ ခုဖွင့်ထားပြီး ကျေးရွာများမှရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များကိုနေရာချထား အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။
ko Aung 00
ရွှေတိဂုံတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာများဖြင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ စုဝေးကာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်တွင် ဒုတိယနေ့အဖြစ် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ယမန်နေ့က လူအင်အား ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး ယနေ့တွင် လူအင်အား တစ်ထောင်ကျော်ပါဝင်လာကြောင်း သိရသည်။ (ဓာတ်ပုံ-ဂျေမောင်မောင်-အမရပူရ)
ကျွန်တော်သင်္ဘောပေါ်မှာ အင်ဒိုနီရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ ပြည်ကြီတရုတ် သင်္ဘောသားတွေပါတယ်။
ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေ စပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့နေ့က ကျွန်တော် facebook မှာဒီနေ့ မြတ်စွာဘုရား တရားတွေပဲရှယ်မယ် ဖတ်မယ်ဆိုပြီး မနက်ပိုင်းရှယ်တယ်၊ အကိုတစ်ယောက်က တစ်သောင်းတန်ငွေ ကိစ္စကို tag ပေးတာတောင် remove လုပ်လိုက်တယ်။
ညနေစောင် အိပ်ရာနိုးချိန်မှာ အင်ဒိုနီရှား သင်္ဘောသားတစ်ယောက်က မင်းတို့စီမှာ ပြဿနာ တက်နေတယ်လို့ပြောတယ် ငါမသိသေးဘူးဆိုပြီး facebook ဖွင့်ကြည့်တော့ မှသတင်းတွေက ပလူပျံနေပြီ အင်ဒိုနီရှားသင်္ဘောသားတွေကို ပြန်ရှင်းပြရတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ချနေတာမဟုတ်ဘူး ဘင်္ဂါလီတွေက ငါတို့မြေပေါ်ကျူးကျော်ပြီးနယ်မြေလုပြီးအကြမ်းဖက်နေတာလို့ရှင်းပြရတယ်။
ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြတာက အယ်ကိုင်ဒါနဲ့ ဗမားယူရို စီကငွေထောက်ပံ့မူရအောင် လုပ်နေတာဆိုပြီး၊ ဟန်ညောင်ရွှေတို့(B-UK) ငွေတောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေပုံတွေကိုပြပြီး သူတို့ကို ရှင်းပြရတယ်။
မင်းတို့မြန်မာမှာ နိုင်ငံသားကတ်တွေမလုပ်ထားဘူးလား အဲဒီကတ်နဲ့ အ၀င်အထွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ်၊ ကိုယ်နိုင်ငံက လ၀က နဲ့ နစကတွေ့ ငွေကိုးကွယ်ပုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့မှ သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်၊၊
စူဟာတိုလက်ထက်ကို ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ရသူတွေဆိုတော့ သူတို့ကတောင်ကိုယ့်မြန်မာတွေကို ပြန်သနားပြီး မင်းတို့တွေ အဲဒီလို့ဖြစ်နေရင်တော့ မလွယ်ဘူးတဲ့၊ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ အရမ်းယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထားရှိတယ်ပြောကြတယ်။ ငါတို့ကဘာသာတူခြင်း မင်းတို့ထက်ပိုသိတယ်လို့တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။
မလေးရှား ပို့ကလမ်(လ်) ဆိပ်ကမ်းရောက်တော့ ထမင်းစားနားချိန်မှာ မလေးအဖိုးကြီးက စကားပြောဖြစ်တယ် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေအကြောင်း ပြောနေကြရင်း ဘင်္ဂါလီတွေအကြောင်းရောက်တော့ မလေးအဖိုးကြီးက အဲဒီကောင်တွေမကောင်းဘူး ငါတို့စီကို တရားဝင်လာတယ်၊ ခိုးဝင်တယ် မလေးမတွေနဲ့ရှုပ်ပြီး ကလေးရတယ်လို့သိတာနဲ့ ဘင်္ဂါလီကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတယ် ကလေးကိုတော့နေခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်၊ မင်းတို့တွေက နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေတော့ သတိထားပါတဲ့၊ ငါတို့ဘာသာတူတွေထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေက အဆင့်အနိမ့်ဆုံး စိတ်ထားအညံ့ဆုံးလို့ပြောကြတယ်။
ကိုတာကင်နာဘာလူး-kota kinabalu(ကိုတာကင်နာဘာလူးတောင်ရှိတဲ့မြို့ )
ဘောနီယိုကျွန်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ် ဘရူးနိုင်ငံဘေး မလေးရှားပိုင်တယ် အဲဒီကိုရောက်တော့လည်း ဘင်္ဂါလီတွေကို မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပဲပေးတာ သူတို့မလေးအချင်းချင်းမှာတောင် ကွာလာလမ်ပူကို မာဖီးရားမြို့ တော် လူရှုပ်တွေများတဲ့မြို့ တော်လို့ပြောကြတယ်။ (မလေးကို အပမ်းပြေခရီးထွက်ရင် ကိုတာကင်နာဘာလူးမြို့ ကိုသွားစေချင်ပါတယ် စင်ကာပူလို့ပဲ)
ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တော့ မြန်မာတရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေက ခိုးလည်းဝင်သေး ပြဿနာလည်းရှာကြောင်း အခုသူတို့ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ လည်း ဒီလို့ပြဿနာခဏခဏရှာပြီး ခွဲထွက်ရေးတောင်းနေလို့ အသေအပျောက်တွေများတဲ့ အကြောင်းပြောသွားတယ်။
ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)နဲ့ပတ်သက်ပြီ ကျွန်တော်ကောင်းတာ သိပ်ပြီးမကြားဘူးဖူး
မြန်မာမြေမှာမွေး မြန်မာမှာပညာသင်ပြီး ငွေမျက်နှာကြောင့် ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ) ဘက်ကလိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့ မရောင်းစားပါနဲ့လို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်....
at 11:15am ·
၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များကို အပြစ်တင်သူများ၊
ပြည်ပရောက်ခေါင်းဆောင်အချို့ကို အပြစ်တင်နေသူများ တွေးကြည့်ရန်မှာ......
ပထမ ရိုးရိုးလေး ဖြစ်လာတဲ့ လူ့မိုက်ရိုင်းသုံးကောင် ကိစ္စကို ကြီးလာအောင် လုပ်ထားတာ ဘယ်သူတုန်း။
ပြဿနာစစခြင်းမှာ မဖြေရှင်းပေးတာ ဘယ်သူတုန်း။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကျုးကျော်သူတွေ အခြေချနေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ဖန်းတီးခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ ပါခဲ့လေသလား။
အမျိုးယုက်သုံးကောင်၏ လူသတ်မုဒိမ်း အမှုကို ကြီးလာအောင် လုပ်ပြီး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အခုလောလောဆယ် သြဇာအာဏာ သက်ရောက်အောင် ဖန်တီးတာ ဘယ်သူပါလဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ကြံဖွတ် ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာ ပါဝင်နေတာ ရခိုင်အမျိုးသားပဲလား ဘာလူမျိုးပါနေတုန်း။
လောလောဆယ်လုပ်ရပ်က စစ်တပ်ကို ဘေးဖယ်ဖို့မကြိုးစားနှင့်ကွ စစ်တပ်မပါရင် မင်းတို့တွေ ဒုက္ခရောက် သွားမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် လိုက်တာ ဘယ်သူတုန်း။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုင်းတပါးက ဘင်္ဂါလီတွေနှင့် ထိပ်တိုက်ပေးတွေ့ထားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက် ကြာနေပြီလဲ။ အဲဒါ တာဝန်ရှိတာ ဘယ်သူတုန်း။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကျုးကျော်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီပြဿနာက အခုမှ ပေါ်ပေါက်နေတာလား။
အရင့်အရင်က ရခိုင်သံဃာတော်တွေနှင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘင်္ဂါလီတွေမှ သတ်တာ နှာစေးနေတာ ဘယ်သူတုန်း။
ရာဇ၀င်နှင့်နေခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘဂ်ါလီနှင့် ထိပ်တိုက်ပေးတွေ့ထားပြီး အညွှန့်မတက်နိုင်အောင် ချိုးထားတာ ဘယ်သူတုန်း။
ရခိုင်အမျိုးသားရေးလုပ်တဲ့ ဆရာတော်တွေကို အမှုအမျိုးမျိုးနှင့် ထောင်ချတာ ဘယ်သူတုန်း။
ဒီပြဿနာဖြစ်လာလို့ အကျိုးမြတ်ရသွားတဲ့ အစိုးရအနေနှင့်
အခုဒီပြဿနာက လွှတ်တော်ထဲက စစ်တပ်ရယူထားတဲ့ ထိုင်ခုံများကို လှုပ်မယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး ဒုက္ခများကုန်မယ်လို့ နမူနာပြလိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် လူထု အကြည်ညိုကျ ဆင်းအောင်လုပ် လိုက်နိုင်တယ်။
အကုန်လုံးသော ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ မဆီမဆိုင်အပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရတယ်။
နောက်ဆုံး မီဒီယာတွေကို လုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်နဲ့ ထောင်ချမယ်ဆိုပြီး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ခြိမ်းခြောက်လိုက်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ ရိုးသားမှုမရှိတာ ဘယ်သူတုန်း။
ဘင်္ဂါလီလို့ ခေါ်တဲ့ သဘောထားက ကျနော် သူတို့ကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့ အမည်ကို အသိမှတ်ပြုပြီး မသုံးချင်လို့ပါပဲ။
လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မိုက်ရိုင်းစော်ကားရင်တော့ Unfriend or Block ပါပဲ နေပူနေလို့ ဦးနှောဏ်စား မခံပါ ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု အပြည့်နှင့် ရေးသားဆွေးနွေးမှုကိုသာ လိုလား ပါသည်။ ပြည်သူ့ အကျိုးစီးပွါး အတွက် စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:44 AM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ပြည်သူလူထု သို့ ပြောတဲ့မိန့် ခွန်း
President Emergency Address on Rakhine State
June 11, 2012 at 6:11am ·
အပြစ်တင်ချင်တာလည်းမဟုတ်သလို တိုက်ခိုက်လိုတာလည်းမဟုတ်ပါ။ မိမိအားနည်းချက်ကို မြင်မှသာလျှင် ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော လပိုင်းများကတည်းက ကျနော်ဟာ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများထံ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်လို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစား နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အစိုးရဖက်ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစိုးရဖက်က သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုမရခဲ့ပါ။ ရုရှားမှ အရာရှိငယ်များကသာ အပြုသဘောဆန်စွာ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအနက်မှ ထင်ရှားသူအချို့ကလည်း တုန့်ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ တုန့်ပြန်ခဲ့သူအနည်းစုရဲ့ ယေဘုယျအမြင်ကလည်း "နိုင်ငံရေးခြေထိုးကွက်" အဖြစ်သာ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုရှုမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်တစ်ကယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒေသခံ ရခိုင်တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာ့ပိုင်နက်နဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အပြင် မြန်မာ့သမိုင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကတည်းက နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းအသိအမှတ်ပြုထားခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်သည် ခွဲထွက်ခွင့်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ သာမန်လူပင်လျှင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီပြဿနာဟာ မုချကို ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်နေတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှု ခေါင်းစဉ်များအောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ တိမ်မြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရစဉ်ကာလ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မှတ်ပုံမတင်မီ နအဖ စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးခေတ်ကတည်းက ဒီရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ လူ့အခွင့်အေ၇းခေါင်းစဉ်နဲ့ အတူ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူအင်အားစုများထဲကို ထိုးဖောက်လာခဲ့ပြီး "ကြောင်းကွဲ သံတူ" ပုံစံနဲ့ သူတို့အတွက်ကို တောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို အဓိက ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့များကတော့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်စောင့််ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (UNHCR) နဲ့ NGO များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့ဟန်တူပြိး ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာလောကကို ကြိုးကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေသခံရခိုင်တွေနဲ့ တင်းမာမှုအမြဲ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလို ပဋိပက္ခမျိုးဟာ အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ နီးစပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော ဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အစ္စလာမ်မစ်ဒေသ အဖြစ်ထူထောင်ဖို့ မူဂျာဟစ်သူပုန်များအဖြစ် ဖဆပလ ခေတ်ကတည်းက သောင်းကျန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုများနဲ့ အတူ ဒီအရေးခင်းဟာ ငြိမ်သက်ဟန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လာဘ်စားသော လ.ဝ.က များနဲ့ န.စ.က များက ဘင်္ဂါလီပေါင်းများစွာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ပျော်ပျော်ကြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီ ဘင်္ဂါလီအဖွဲ့တွေဟာ သမိုင်းကိုလိမ်လည်ဖန်တီးဖို့အတွက် အင်တာနက်မှ ဝါဒဖြန့်ချီခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီဖြစ်သလို အနောက်နိုင်ငံများအထိလည်းပေါက်ရောက်အောင် လုပ်နေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ခု ရင်နာစရာကောင်းတာကတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာနဲ့ မြန်မာဆိုတာကို တွဲပြီး မြင်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေသည် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံအပြီး ပြည်ပကို တိမ်းရှောင်သွားကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
သမိုင်းကိုလိမ်လည်ဖို့ လုပ်လာခြင်းသည် သူတို့ရဲ့ မရိုးသားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သိသာစေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းဆိုခြင်းသည် သူတို့ရဲ့ အကောက်ဥာဏ်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ လက်နက်များကို တွေ့ရှိရသည်ဟု သတင်းများစွာထွက်ပေါ်နေခြင်းသည် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ အားထုတ်နေပြီဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့ ပိုင်နက်နဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြိမ်းခြောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ နိုင်ငံေ၇းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်သောအမြင်များ စူးရှထက်မြက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အမြင်မရှိရင် ဖျံနှစ်ကောင် ငါးကိုလုနေတုန်း မြေခွေးက ယူစားသလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရနဲ့တစ်ကွ ကျန်သော နိုင်ငံေ၇းပါတီအသီးသီးကို မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းမြှောင်ဒေသ ရှိ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသများကို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီး အန္တရာယ်င်္ရှိသော ဇုန်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာ သဘောမကွဲဘဲ အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနယ်မြေတွေကို မဆုံးရှုံးသေးပါ။ နိုင်ငံတကာရှိ ကိုယ်ကျိုးရှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေလုပ်ကြံနေတာကို ခံနေရသော မြန်မာပြည်ကို ဒီလိုလုပ်ကြံခံနေရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့ ရာဇသံမျိုးကို ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များက ပေးစေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများမှ မြန်မာသတင်းဌာနများဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားများက ကသပိတ်မှောက်လိုက်လျှင် မည်သို့မျှ လည်ပါတ်၍မရနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမိဒီယာတွေကို နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ ပြည်သူအများက သပိတ်မှောက်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ပြုစေလိုပါတယ်။
ဒီလို ခါးသီးတဲ့ ဒုက္ခတွေကို သွေးချင်းရခိုင်တွေကို ပေးမိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့မှာ အကြွေးကြီးကြီးမားမား တင်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ဒီလို အရေးအခင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ယခင်လက်တွမညီခဲ့မှု ရလာဒ်တွေဟာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားရေး၊နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာ ယခင်လို မကွဲလွဲကြတော့ဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်နိုင်ကြကာ ကိုယ့်အမှားကို "အချိန်မီ" ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:27 AM No comments:
Khu Dann ရဲ့ လက်ရာ.....
ဘာသာရေး အရေးအခင်းမဟုတ်... ပြည်ပမှကျူးကျော်လာတဲ့
အကြမ်းဖက်သမားများရဲ့ရက်စက်မှုကို ကာကွယ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းလူမျိုးများအဖို့ ..
မြန်မာလူမျိုးများမှ ပုခုံးဖြင့်ထမ်း၍ တင်မြောက်ပေးမည်သာဖြစ်သည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါစေ... ဘယ်ဘာသာကိုဘဲ ကိုးကွယ်..ကိုးကွယ်
မြန်မာလူမျိုးများမှ အမျိုးသားညီညွတ်မှုနှင့် အမြစ်ပါမကျန်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:15 AM No comments:
တရားမျှတမှု ငြိမ်းချမ်မှု ...ထာဝရ
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောအရေးအခင်းသည်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ၏ အရေးအခင်းမဟုတ်၊
ခေါတောကုလားဆိုးများနှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အရေးအခင်းလည်းမဟုတ်၊
ခေါတောကုလားဆိုးများနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးတို့၏ အရေးအခင်းသာဖြစ်သည်။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းရေး နှပ်ကြောင်းပေးသူ ဒေါ်လာစားကြောင်ဖားကြီးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဘန်းပြ တို့မီးရှို မီးလေသံများလည်းဆန့်ကျင်ကြ။
ယနေ့ အရေးသည် ရခိုင်အရေးမဟုတ်ပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၏ အရေးဖြစ်သည်။ သွေးနီးကြပါစို့။
Kyaw Khant ရန်ကုန်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:08 AM No comments:
" အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာ တို့ ဖက်မှ ရပ်တည်၍ မြန်မာများအား တန်ပြန်စော်ကားနေသာ အမေရိကန် "
on Monday, June 11,
2012 at 6:07am ·
မျိုးချစ်မြန်မာ ရဲ့ အမျိုးကိုတကယ်ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား သူငယ်ချင်းတို့ရေ
မနေ့က FaceBook ပေါ်မှာ Maryland မှာနေတဲ့ အမ တင်မိုးအေး နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ မေးဖွားကြီးပြင်းလာပြီး မြန်မာ့အရေးကို
RFA VOA BBC DVB က ပြောသမျှ မြူမှုန်ပမာဏ လောက် သိပြီးတော့ ဗြုန်းစားကြီး ရိုဟင်ဂျာ ကြင်နာသူ ထဖြစ်ပြနေတဲ့ ရူးကြောင်မူးကြောင် အဖြူကောင်တစ်ကောင် စကားအချေအတင် ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီမှာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းကလဲ အကျိုးအကြောင်းသင့် ဝင်ရှင်းပြပြောပြပေမယ့် နဲ့ အဖြူကောင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ငါအကုန်သိ ငါအကုန်တတ်ဆိုတဲ့ သောက်ချိုးနဲ့ သူအင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ မွေးရာပါ အားသာချက် ကိုအပေါ်စီးယူပြီး ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ တွေကဘဲ အစွန်းရောက်နေသလိုလို ပညာသားပါပါ စစော်ကားပါတော့တယ်။
ဒီမှာတင် အမ က ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ အမျိုးကိုထိရင် ဗုန်းလိုထပေါက်တတ်တဲ့ မျိုးချစ်လူမိုက်ကြီးကို လှမ်းပြီး SOS (အရေးပေါ် အကူအညီ) လှမ်းတောင်းပြီး သူတို့ ပြောထားတဲ့ စကားတွေကို လှမ်းပြပါတယ်။
မူရင်း Link ကတော့ https://www.facebook.com/harreld/posts/102045443270779?notif_t=share_reply ပါ
မတော်တစ်ဆ ဖျက်လိုက်မှာစိုးလို့ ပုံပါရိုက်ကူးထားပါတယ် အောက်ပါ ပုံထဲမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်
ဒီထဲမှာ သူရေးထားတာက စကထဲက မွတ်စလင် မိခင် နဲ့ ခလေး တစ်ယောက် ပုံ ကိုပြပြီး
" ဒီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာ အကြမ်းဖက်သူတွေ နဲ့ တူသတဲ့လားဗျာ "
ဆိုတဲ့ သနားစဖွယ်ဟာသ ကိုရေးထားပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ မြောက်ပိုင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ တထေရာ ထဲ တူပါတယ် လို့ မဟုတ်မဟတ်တွေ အစချီပြီး ခုလိုရေးထားပါတယ်။
Do these people look like "terrorists" that menace the sovereignty of Burma/Myanmar and credibly threaten to turn the nation into the seat ofanew caliphate?
They look likeapeople that needs basic compassion, assistance, and hope, like the many ethnic peoples of Eastern (and Northern, Southern, and Western) Burma do.
Supportamulti-ethnic federal state without hate.
Religious violence has no more basis in the country than ethnic riots did in the 60s.
မြန်မာ ကုလား တရုပ် အကုန်လုံး ငါတို့ မျက်စေ့ထဲမှာ အတူတူဘဲ မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြူကောင်တွေရဲ့ မွေးရာပါဖြစ်တဲ့ အသားအရောင် ကို အဖြူကလွဲရင် ကျန်တာ တူတူဘဲ ဆိုတဲ့ နှိမ့်ချစိတ်ကဖြစ်လာတဲ့ Color Blindness ကို သေချာသတိထားမိကြမှာပါ။
ကျွန်တော်ဟာ သာမန်အားဖြင့် ဖြစ်တည်မှု ရပ်တည်မှု နဲ့ ယုံကြည်မှု ကိုးကွယ်မှု မတူသူတိုင်းကို ရန်သူလို့ မသတ်မှတ်တတ်ပါဘူး။
မိမိ နဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးဟာ အရာရာမှာ အမဲ နဲ့ အဖြူ လို ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပါစေ ကျွန်တော် အရင်ဆုံး သုံးသပ်တာက နှစ်ချက်ထဲပါ။
(၁) ထို သူ ဟာ အတွေးအခေါ်ဥာဏ်ရေ မြင့်မားတဲ့ သူ ဟုတ်ရဲ့လား ? (ဆိုလိုတာက ပြိုင်ပြောနေဖို့ အချိန်ပေးဖို့ တန်ရဲ့လား)
(၂) ထိုသူဟာ သူ့ရဲ့ တကယ့် ယုံကြည်မှု စစ်စစ်အပေါ်မှာ အခြေခံနေတာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာပါရဲ့လား ?
လူရှေ့သူရှေ့ အသံကောင်းဟစ်ပြတတ်တဲ့ သူတွေ နဲ့ ဘာကိုဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ MSG ကို သူတို့ မရသလို ကိုယ်နားလည်စေချင်သလိုလဲ သူတို့ ဘယ်တော့မှ သဘောမပေါက်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက ကိုယ်ပြောနေတဲ့ Subject ကို ရင်ထဲက သက်ဝင်ယုံကြည် တဲ့ လေးစားမှု မှမရှိတော့ သူများ ဘယ်လောက် အာပေါက်အောင် ပြောလဲ သူတို့ ဘယ်တော့မှ Learn မလုပ်တတ်တဲ့ " ငါ " တကောကောတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကြောင့်ပါ။
အဲ့ဒိနှစ်ချက်လုံး ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ ရန်သူဖြစ်နေပါစေ ၄င်းရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်မှု နဲ့ ပညာ ကို အမြဲ လေးစားမှု ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရော စစ်သားတွေ ပါ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီမှာတင် လောလောလတ်လတ် ကျွန်တော့် လူမျိုးတွေကြောင့် သွေးတွေ ပေါက်ထွက်မတတ် နာကျင်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်ကန်ခံရသလို ခံစားရတာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ အဖြူကောင်ကို သူနားလည်မယ့် တစ်ခုတည်းသော ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ခုလို အယဉ်ကျေးဆုံး ထိန်းသိန်းပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
Who do you think you are to judge how my people should feel like in this total inhumanity that was done upon them?
Have you ever lived under the same roof with those Rakhine Ethnics even for one night?
Have you ever been half asleep every single nights in fear of not knowing when your house might be burnt down?
Have you ever witnessed one of your daughter or sister or parents got their throat cut off alive.
Have you ever felt the pains that all my Rakhine people have been living with since birth?
Why don't you go into those Rohingyas' territory dressed up asaRakhine and try your B.S peace method and unpractical theories.
Good luck with keeping your head attached to your neck.
We share the same land,
We are Myanmar and we will not tolerate any threats from any Terrorists no matter how powerful they are.
The last thing we need isaheartless opinion fromaWhite Boy from New York.
Go tell your foolish bedtime stories to " AL - QAEDA " members.
They may let you keep your head attached foranight or two.
DON'T YOU EVER DARE TO JUSTIFY MY PEOPLE WITHOUT SENSING OUR PAIN.
You will regret you have ever got involved in our matters.
We are United Citizens of the Nation called Myanmar.
REMEMBER THIS FROM NOW ON,
ATTACKING ONE OF US IS AN ATTACK TO ALL OF US!
MY NAME IS MYO CHIT MYANMAR AND I WILL DEFEND MY NATION AT ALL CAUSE.
STAY OUT OF OUR MATTERS.
ကျွန်တော် ဟာ ဒီမှာ မမွေးတဲ့ အတွက် သူ့လောက် အသုံးအနှုန်းကြွယ်ဝ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဟာ မိခင်စကားဖြစ်တဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော် ချက်ချင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လက်တန်းပြန်ရေးခဲ့တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းပါကောင်းပါမယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုပါတယ်။
အဲ့မှာတင် အရှိုက်ထိသွားတဲ့ အဖြူကောင်ဟာ ကျွန်တော့် ကို အောက်ဘောထိုးကန်ပါတော့တယ်
Harreld Dinkins >> " ‎Myo Chit Myanmar: Oh no! I am truly afraid of your Beverly Hills mad swagger!"
ဒါက အကြောင်းအရာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စကားခြင်း မနိုင်တော့လို့ ကျွန်တော့်ကို
" အိုးးး .. ကြောက်ပါပြီ သူဌေးရပ်ကွက်က ထင်ရာစိုင်း သတ္တိရှင်ကြီးရယ် " ဆိုတဲ့ ဘန်းစကားနဲ့ အရှက်ပြေ ပြန်လှောင်ပြီးပျောက်သွားပါတော့တယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ခပ်ကြောင်ကြောင် အဖြူကောင်တစ်ကောင်နဲ့ ရန်ဆက်ဖြစ်နေဖို့ အချိန် မပေးချင်တော့တာနဲ့ မေ့ထားလိုက်ပါတယ်။
လားလား ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဒီ ငတိ က နောက်ကွယ်မှာ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်သွားတာကိုး ...
သူ့ရဲ့ မဖြစ်စလောက် ခေါင်းလေးနဲ့ အချိန်ချင်းတူနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ၁၂ နာရီ တိတိ တောင် စဉ်းစားပြီး မှ ကျွန်တော့် ကို နောက်ကွယ်ကနေ MSG ပို့ပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ ဘယ်လောက်တောင် လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာသာ ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့။
Harreld Dinkins >> Myo Chit Myanmar
You areastupid, impotent, and tiny-penised punk. ( ဘီလူးခေါင်းတန်းချွတ်ပြီး သူ့အဆင့်ကို ပြတော့တာပါဘဲ :D )
Let me clarify that: "Your imaginary paranoia and shit-talking about this/that shows that you don't understand what-the-fuck I am talking about.
"I'm nota"White Boy from New York" you idiotic rube.
I'mafreaking mixed boy from south Louisiana.My ancestors have been in "this" country since before it was this country.
My ancestors have been mixing it up in terms of sex/religion/music since before you imagined what music is.
My ancestors invented REAL music, not some bullshit ("I'ma'producer'") crap that seems to be your bread/butter.
You can growafucking pair and contact me directly atadirect email address.
You can have actual arguments.But to be clear:
1. Yep. I've lived with two different Rahkine non-haters and non-Rohingya who were happily with me for several months as roommates who did NOT have anxiety about their penis size such that they had to project hatred on other people.
2. Yep. I've actually had overadozen "American" friends murdered before I left New Orleans (East LA is suchafucking nursery school), have spent time under shelling by the Tatmadaw, and am super-clear that YOU are beingagiant douchebag.
3. Yep. I don't really giveaflying fuck about your delusional pronouncements that involve (again!) the fact that you are somehow The person to speak for Your people. You're not. There are plenty of Arakanese (both Rakhine and Rohingya) who GET IT and who think that YOU areafucking asswipe for suggesting otherwise.
4. You're kind of an asymmetrical dick. I'm writing to YOU about disagreements and you want to threaten me publicly? I hope that your alleged children will have better clue-ness.
5. Don't try to threaten me.
You'rd kind ofashitpunk for having done so to begin with, but it demeans any/all discussion.
If you'd like to be in the Greater DC/NOLA/NYC/ATL areas and then some soon, we can settle this "like men" (if that's what makes you hard) or I can meet you anywhere/anytime in Greater LA (although it's clearly the city of the malcontents and I generally try to avoid is as much as Houston) to clarify.
Don't fuck with me, you pathetic little man who is younger than me and has no idea of what the fuck you're talking about.
Your life is otherwise interesting.
I'm your FUCKING ALLY, YOU MADMAN.
Deal with the difficult shit and talk with me.
Don't threaten or bullshit in any way/shape/form.
It's unseemly. For both of us, I think.
If you're reallyaMAN, then you'll send me your deets to do direct contact to have this discussion.
As someone who has (also) worked to increase awareness/engagement for Burmese musicians, you should think about trying to holler-without-hate.
Embrace the hatred. Love it.
Thats's what Shakyamuni would have done, right?
Shakyamuni wasaKalar.
His message must have only been meant for other spaces.
Grow the fuck up, Myo Chit.
I haven't given you shit (in fact, I've defended youanumber of times) about the choice of "Myanmar" as opposed to "Burma" about anything.
So really, enjoy your adopted home. It would never occur to me to abandon my home without better awareness...
Especially when my adopted home was so clearly multi-ethnic and multi-cultural and set up to welcome people that were "different" as both refugees and as immigrants in general.
Get it together, man (notice that I don't apply the impossibly arrogant/inappropriate/offensive "Boy" to you) and talk likeagrown-up.
If this is where/who you are with shit, then deal with it. If you wantabetter country in Burma (which I still care about, no matter what you say), then you might think about trying to threaten less and to talk more.
When you grow up, you can holler,
ကျွန်တော် ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်လိုဘဲ မြန်မာ ကို စော်ကားရင် မခံနိုင်တဲ့ မြန်မာသွေးစစ်စစ်နဲ့ ညီအကိုတွေ ဒီအဖြူစုတ် ကို မြန်မာ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ သေချာ နားလည်အောင် ဝိုင်း ဝန်း သင်ကြားပေးကြပါစို့လား။
သူ့ရဲ့ Profile Page က ဒီမှာပါ။
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ အထူးတလည်မှာကြားဖို့လိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့် လူမျိုးတွေ ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်
ဂျပန်ဘတ်(စ)များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြေးဆွဲမည...
ရွှေတိဂုံတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒေ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ပြည်သူလူထု သို့ ပြောတဲ့မိန် ...
" အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာ တို့ ဖက်မှ ရပ်တည်၍ မြန်မာမျာ...